Suuqgeynta Mawduuca B2C ee 2013 | Martech Zone
Suuqgeynta Mawduuca B2C ee 2013
Khamiista, Oktoobar 17, 2013 Axad, Oktoobar 13, 2013 Douglas Karr
Ganacsiyada Macaamiisha (B2C) shirkaduhu waxay ka faa'iideysanayaan suuqgeynta waxyaabaha ka kooban qayb muhiim ah oo ka mid ah xeeladaha suuqgeynta. Sawir gacmeedkani wuxuu muujinayaa taatikada, oo ay ku jiraan ujeeddooyinka ugu badan, aaladaha dhiirrigelinta ee ugu jecel, cabbiraadda iyo kiisaska guusha ee yar.
Suuqleyda ayaa si isdaba joog ah u isticmaalaya suuqgeynta waxyaabaha si ay macaamiisha ula macaamilaan waxyaabo soo jiidasho leh oo wax bara, ogeysiiya, madadaaliya kuna hagta safarkooda wax iibsashada. Waxaa muhiim ah in laga gudbo buuqa oo la fiiriyo waxa aan suuqleyda u sameyneyno sidii warshad ahaan si aan wax uga barano isbeddellada muhiimka ah iyo kiisaska guusha. Neil Bhapkar, VP ee Suuqgeynta Uberflip
Uberflip waxay bixisaa dhowr meelood oo ah suuq-geynta suuq-geynta. Buugaagta rogroga waxay PDF-gaaga u rogi kartaa waayo-aragnimo is-weydaarsi bogga is-dhexgal ah. Ku fiican buugaagta, waraaqaha cad, warbixinnada iyo majaladaha. Iyo Hubs keen waxyaabaha aad ka kooban tahay oo dhan hal meel oo dhexe, waxqabad leh oo ku soo biirinta hore-dhammaadka iyadoo aan loo baahnayn barnaamij
Tags: b2cganacsi macaamiishaContent Suuquberflip
Dabinka: Caqli-galinta, Is-beddelka Mawduucyada Iswada